Horjoogaha Butlaan oo tegi kari waayay Kismaayo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Horjoogaha Butlaan oo tegi kari waayay Kismaayo
Horjoogaha Butlaan Siciid Deni oo rabay inuu jabiyo amarka dawlada ayaa isku dayay inuu si toosa Kismaayo u tago laakiin laga diidey kadibna dib ugu laabtey Garoowe. Diyaarada sidey ayaa ku dhici weyday inay diido amarka.
Dawlada Somaliya ayaa soo saartey amar sheegaya in diyaarad kasta oo tagaysa Kismaayo iyo ta ka duuleysaaba soo maraan Muqdisho si loo hubiyo waxa ay sidaan. Waxase ilaa hadda ka kibirsan Muqdisho horjooge Siciid Deni.
Axmed Madoobe oo Kiiniya ku hayso Kismaayo ayaa raba inuu iskii isku caleemo saaro ayadoo fadhiidyo badan oo hore u fashilmey ay raban inay dawlada dhinac kale ka soo galaan.
Ilaa hadda ma sheegin goorta uu is caleemo saarayo oo rasmiya, wuxuuna raba inay qarsoodi u noqoto. Dhinaca kale waxa jira warar sheegaya in horjooge Siciid Demi loo fasaxay inuu tago oo beri aadi doono Kismaayo.